12/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Na tsy hipoka tanteraka aza, dia tafitan’i Rossy ny « Hafatra » nandritra ny seho voalohany nataony tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ao anatin’ny fanakalazana ny faha-30 taonan’ny prorossy sy ny faha-10 …Tohiny
Mpiaro ny fomban-drazana. Niamboho ny 06 febroary teo ny Printsy vavy Georgette Kamamy, teo amin’ny faha-81 taonany. Endrika iray tsy afa-misaraka amin’ireo fomba amam-panaon’ny Sakalavan’i Menabe izy. Noho izany fahoriana sy fahabangana lehibe ho an’ny …Tohiny
Mbola mitàna ny sain’ny maro ny raharaha Houcine Arfa ary maro ny adihevitra manodidina izany nanomboka tamin’ny fomba nandosirany teo am-pelatanan’ireo mpiandry fonja, ny fomba nivoahany ny sisintanin’i Madagasikara, sns. Fa misy adihevitra iray koa …Tohiny
Efa nampoizina ary efa nosoratana teto amin’ny gazety fa tsy afaka hiara-dia na oviana mihitsy izany Andry Rajoelina sy Hajo Andrianainarivelo izany satria samy te ho lohany. Fandrebirebena saim-bahoaka daholo ireny fihetsiketsehana ivelany nasehon’ny ARMADA …Tohiny